Maxaa ka soo kordhay kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi - Jowhar Somali news Leader
Home News Maxaa ka soo kordhay kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi
Maxaa ka soo kordhay kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ku kulmay magaalada Addis Ababa, ee caasimadda waddanka Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu Addis Ababa u joogay shirka sannadlaha ah ee madaxda Midowga Afrika. Dhanka Somaliland, horey ugama qeybgali jirin kulamada AU, haddana ma cadda sababta uu Muusa Biixa u tagay halkaas.
Labada Madaxweyne ayaa goob joog ka ahaa shir madaxeedka ururka Midowga Afrika oo ka dhacay xaruntiisa Addis Ababa.
Faah-faahin buuxda lagama hayo waxa ay ka wada hadleen Farmaajo iyo Biixi, waxayna warar soo baxay sheegayeen inay yeesheen kulan ay albaabada u xirnaayeen oo qaatay in ka badan nus saac.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed ayaa xaqiijiyay shirka balse ka gaabsaday inuu faahfahin ka bixiyo.
Wasiirka Arrimaha dibadda iyo iskaaashiga caalamiga ah ee Somaliland, Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), oo maanta magaalada Hargeysa shir jaraa’id ku qabtay ayaa xaqiijiyay kulanka dhex maray Biixi iyo Farmaajo, inkastoo uu ka gaabsaday inuu xogta oo dhammeystiran bixiyo.
Wuxuu wasiirku sheegay in Kulanka uu la mid ahaa “shirarka caadiga ah ee ay isku arkayeen madaxweynayaashii isugu tagay magaalada Addis Ababa”.
Farmaajo iyo Biixi ayaa si gaar ah ugu kulmay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed.
Kulanka uu ahaa mid albaabada ay u laabnaayeen oo labada hoggaamiye keligood ay wada hadleen. Wuxuu shirka qaatay illaa 40 daqiiqo. Horay si fool ka fool ah isuma aysan hor fariisanin labada mas’uul tan iyo intii ay xilalka qabteen.
Dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhawaanahan isku fahmi la’aa wadahadalladii u dhaxeeyay, oo aan dhowr sano qabsoomin.
Laakiin wax kulan ah labada dhinac ma dhex marin wixii ka dambeeyay markii uu xilka madaxweynaha Soomaaliya la wareegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2017-kii.